Archive du 20171011
Ambohitrarahaba Noloarana ny mason’ilay zazalahy, nalaina an-keriny ny anabaviny
Hita teny Ambohitsimeloka, Ambohidratrimo Anosiala omaly hariva Razafindrazaka Hiancy, tovovavikely vao 6 taona nisy naka an-keriny teny Ambodivary Ambohitrarahaba.
Depiote José Randrianantenaina Mijery akaiky ireo tanora
Mpianatra Informatika niisa 200 mahery no indray navoaka tao amin’ny kaominina Ambano, distrikan’Antsirabe faharoa ny sabotsy 7 oktobra 2017 lasa teo.
Hery Rajaonarimampianina Mandavaka ny lavaka hilevenany
Mazava ny tanjon’ny filoham-pirenena ankehitriny fa hitady izay fomba rehetra hitazonana ny fahefana eo am-pelatanany.
Fivoaran’ny teknolojia Azo hanafainganana fifidianana, hoy ny Marina
Manoloana ny adihevitra be mikasika ny fikitihana ny lalàmpanorenana mialoha ny fifidianana dia nanambara ny antoko Marina, tamin’ny alalan’ny mpandrindra nasionaliny, Desiré Ranaivoson,
Taratasin’I Jean Tsy miteny, tsy mivolana
Salama tsara ve ry Jean aa! Toa tsy miteny, tsy mivolana mihitsy ity ianareo ee? Ianareo moa no hoe renimalala?
Kaominina Ivato Hahazo tranompokonolona ny ao Ankadindravola
Hahazo tranompokonolona vaovao ny ao amin’ny fokontany Ankadindravola, kaominina Ivato. Omaly no notanterahina ny ady fototry ny trano izay hanana refy 25 amin’ny 8 metatra.
Fanalana ny fako eto Antananarivo Efa vitan’ny RF2 ny andraikitry ny kaominina
Mitohy hatrany ny fanilihan’ny fitondram-panjakana andraikitra amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’izao manoloana ny asa fanadiovan-tanàna.
CLAM Hampanara-penitra ny sakafo sy ny zava-pisotro
Fikambanana iray nijoro teto amintsika efa ho folo taona izao ny CLAM na ny « Consortium des Laboratoires Agro-alimentaires de Madagascar ».
Samy manana ny mahamaika azy!
Samy manana ny maha maika azy ! Io azo hamintinana ny fihetsiky ny mpitondra manoloana ny zava-misy ankehitriny. Mirongatra ny pesta, manjaka ny fahantrana,
Antanety-Antsirabe Mpitondra moto tafasitrika tany ambany kamiao
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalam-pirenena faha-7 tao Antsirabe tamin’ny alatsinainy lasa teo.
Antananarivo sy ny manodidina 21 no matin’ny pesta
Hatramin’ny volana aogositra teo no ho mankaty dia nahatratra 21, raha ny tarehimarika farany navoakan’ny avy eo anivon’ny ivontoeram-pitiliana ny fahasalamam-bahoaka (IHS) etsy Analakely no matin’ny aretina pesta ho an’Antananarivo Renivohitra,
Rajaonarimampianina Mandamin-dresaka momba ny Pesta
Ampy ny filàna amin’ny ara-panafody, ara-materialy sy ara-pitaovana, ary indrindra ny arak’olona mba hiatrehana ny valan’aretina pesta, raha ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly.
Fanadiovana an’Antananarivo Hanampy ny SAMVA ny kaominina
Nisy ny fivoriana maika omaly maraina tao amin’ny lapan’ny tanàna Analakely teo amin’ny ny mpiara-miasa akaiky tamin’ny ben’ny tanàna notarihan-dramatoa Lalao Ravalomanana.
Tsenan’Anosibe Nakatona ary nodiovina tanteraka
Nisy ny fanadiovana faobe nataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) tao amin’ny tsenan’Anosibe, tsena lehibe eto Antananarivo renivohitrana hifaneraseran’ny mponina manerana an’I Madagasikara.
Fanakatonana ny TIKO AAA Andraikitry ny fanjakana ny mamaha ny olana misy
Tompon’andraikitra voalohany amin’ny famoronan’asa sy ny fiantsoana ireo mpandraharaha avy any ivelany na avy ato anatiny mba hampiasa ny volany eto amintsika ny fanjakana Malagasy,
Salon International de l’Habitat Raikitra ny andiany faha-19
Nambaran’ny « agence Premiere Ligne » tarihan’Andriamatoa Dominichi Ramiaramanana teny amin’ny Louvre Antaninarenina omaly talata 10 oktobra fa hotanterahina eny amin’ny Forello Expo eny Tanjombato ny 19 ka hatramin’ny 22 oktobra 2017 ny « Salon International de l’Habitat » andiany faha-19.
Pesta ao Fenoarivo Atsinanana 21 ireo marary naiditra hopitaly hatry ny omaly
Tao anatin’ny 5 andron’ny tranga voalohany dia efa tafakatra avo folo heny ireo olona naiditra hopitaly fa mararin’ny pesta ao Fenoarivo atsinanana faritra Analanjirofo.
Trafikana basy Miaramila 2 voasambotra teny Itaosy
Vosambotra teny Andranonahoatra Itaosy ny alin’ny alatsinainy teo tokony ho tamin’ny 8 ora ny miaramila miisa 2 mpanao trafina basy.